लकडाउनमा आत्महत्या भयावह भन्नु गलत, खास कुरा के हे ? « Dainik Online
लकडाउनमा आत्महत्या भयावह भन्नु गलत, खास कुरा के हे ?
प्रकाशित मिति : असार ८, २०७७ सोमबार
कोरोनाको संकट र लकडाउन पछि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो ! आत्महत्याको अबस्था भयावह हुँदै भन्ने जस्ता समाचार हिजो आज आउन थालेका छन ।
लकडाउन सुरु भए देखि ७५ दिनसमम्म अबधिमा नेपालमा एक हजार २ सय २७ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउछ। जुन दैनिक सरदर १६ जना पर्न आउँछ । तर आत्महत्या अहिलेको मात्र समस्या भने होइन ।
प्रकृतिक बिपत्ति पर्दा, रोग ब्याधि फैलिँदा जस्ता असहज र जोखिम पुर्ण अबस्थामा मानसिक रोग तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम भने हुन्छ । त्यसैले आत्महत्या लकडाउन पछिको मात्र समस्या हो । लकडाउन पछि भयावह भएको छ, पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो । लकडाउन भन्दा पहिले र लकडाउन पछिको तुलना गर्ने हो भने खासै फरक देखिदैन। तर बढदै जाने संकेतहरु भने देखा पर्न थालेकाछन ।
व्यक्तिले आत्महत्या आफ्नो ब्यक्तिगत कमजोरीका कारण गर्ने नभएर आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा अन्य जोखिमका तत्त्वहरूको संयुक्त प्रभावका कारण हुने गर्दछ । धेरै जस्तो केशमा आत्महत्याको प्रयास वा आत्महत्यालाई मानसिक रोगको एउटा लक्षणको रूपमा लिनुपर्दछ । जसरी कुनै कुनै शारीरिक रोगमा केही ब्यक्तिहरु उच्च जोखिमा हुन्छ । त्यसै गरि केही ब्यक्तिहरु मानसिक रोग र आत्महत्याको हिसाबले केहि उच्च जोखिममा हुन सक्छन ।
प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणको पैसा लिन थालेपछि राजमोको आपत्ति
काठमाडौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले कोरोना परीक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय
यस्ता व्यक्तिले नखानुहोस् मेवा, हुनसक्छ घातक
एजेन्सी । मेवा सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा जनक मानिने गरिन्छ। यसमा पाइने भिटामिनले
कराँचीमा भारतले आक्रमण गराएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको आरोप
इस्लामावाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गत मंगलबार पाकिस्तानको कराँची स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीमा भएको आतंककारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको ‘गोप्य भेट’ले
ओलीसँगको ‘निर्णायक’ छलफलका लागि बालुवाटार पुगे प्रचण्ड
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पार्टी एकताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा अर्का
इङ्गल्यान्डमा लकडाउन खुकुलो भएपछिको रमाइलो (फाेटाे फिचर)
काठमाडाैं । पबहरू, रेस्टुरेन्ट, कपाल बनाउनेहरू र सिनेमाघरहरू तीन महिना लामो लकडाउनपछि खुल्न शुरू भएका
ट्रम्पको समर्थन गर्ने र्‍यापर कान्ये वेस्टले गरे अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लड्ने घोषणा
काठमाडौँ । र्‍यापर कान्ये वेस्टले नोेभेम्बरको अन्त्यमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लड्ने भएका छन्। राष्ट्रपति
धनगढी । सुदूरपश्चि प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा विपक्षी दल राजपाका सांसदहरुले
उत्कर्षमा नेकपा विवाद : यसकारण लाग्यो मोहनविक्रम सिंहलाई चिन्ता
नेपाली राष्ट्रियता र नागरिकता नीति
भारतले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग स्वीकार गर्ने दिन आउँछ
कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– १०